စင်ကာပူနိုင်ငံနေ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး တိုက်ပေါ်မှခုန်ချသတ်သေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စင်ကာပူနိုင်ငံနေ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး တိုက်ပေါ်မှခုန်ချသတ်သေ
စင်ကာပူနိုင်ငံနေ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး တိုက်ပေါ်မှခုန်ချသတ်သေ
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 17, 2011 in Myanma News | 51 comments
စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ Serangoon Central, Block 420 နေ မရင်ငြိမ်းပွင့်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သူမနေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းမှ ခုန်ချပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ တုန်လှုပ်ဖွယ်သတင်းသည် Facebook အပါအဝင် လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့် အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး လူအများ အနေဖြင့် အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရသည်။ သူမ၏ Facebook ပေါ်တွင်လည်း “I Miss Being Happy” ဆိုသည့် စကားလုံးအား ပုံဖော်ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
သူမအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ရခြင်းမှာ သူမ၏ချစ်သူဖြစ်သူနှင့် ပြတ်သွားခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆရပြီး သေဆုံးချိန် တွင် သူမ၏ချစ်သူဟောင်းဖြစ်သူ၏ နာမည်အား ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် tattoo ထိုးထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုနည်းတူ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် “Dear, why are you so cruel?” ဟု ရေးသားထားသည့် သူမနှင့် သူမ၏ချစ်သူဟောင်းတို့ အတူတွဲရိုက် ထားသော ဓာတ်ပုံအားလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မရင်ငြိမ်းပွင့်သည် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးမစီရင်မီ facebook ပေါ်၌ “Please take care of my boyfriend” ဟု အမည်ပေးထား သည့် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်း တစ်ခုအားလည်း ရေးသားထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းသည် သူမချစ်သူဟောင်း၏ ရည်းစားသစ်ဖြစ် ဖွယ်ရှိသော မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ရည်ညွှန်းပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
မရင်ငြိမ်းပွင့်သည် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ ၄ လွှာတွင် အခြားမြန်မာအမျိုးသမီး ၇ ဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ကြောင်းနှင့် တစ်ဦးတည်း သီးသန့် နေထိုင်တတ်သူ၊ သူမ၏အခန်းတွင်း၌သာ ကွန်ပြူတာနှင့် အချိန်ကုန်ဆုံးစေသူဟု အခန်းဖော်များ၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။ Facebook ပေါ်၌ပင် သူငယ်ချင်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး လတ်တလောကာလတွင်း သူမ၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စများ တွင် အခက်အခဲများရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သူမ၏ချစ်သူဟောင်းသည် လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ယူဆရပြီး သူမထံသို့လည်း မည်သည့်​ယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ လာရောက်တွေ့ဆုံဖူးခြင်း မရှိကြောင်း အခန်းဖော်များက ပြောပြခဲ့သည်။
မရင်ငြိမ်းပွင့်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ နန်ယန်ပိုလီတက္ကနစ်မှ သူနာပြု ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး Kandang Kerbau အမျိုးသမီးနှင့် ကလေး သူငယ်ဆေးရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤဖြစ်ရပ်သည် နိုင်ငံတကာတွင် နေထိုင်သော မြန်မာလူမျိုးများအတွက် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားဖွယ်၊ သင်ခန်းစာယူဖွယ် သတင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
>>> သင် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ပါသလား။ သေဆုံးသွားခဲ့သူနှင့် သိကျွမ်းမှုရှိပါသလား။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ပါသလား။ သင်မျှဝေလိုသော အကြောင်းအရာ (သို့) သတင်းဓါတ်ပုံ စသည်တို့အား sreport@shwelonemail.com သို့ ပေးပို့မျှဝေနိုင်ပါသည်။
ဖတ်ရတာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်..ခလေးမနှယ်..အဲလောက်ထိ..အချစ်ရူးဖို့ မသင့်ပါဘူး….
ဒီအောက်ကပုံတွေက ရွာပြင်က အိမ်ကြီးဆီကတစ်ဆင့် မ.လာတာပါ..
သူ့ ရဲ့ Facebook page ပါ
လောကကြီးက နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါဗျာ..
စူစိုက်လုပ်လိုက်တာ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို
အားလုံး စိတ်ဓါတ်ကြံ့ကြံ့ခံ ထားစေချင်တယ်…
အင်း မြန်မာပြည်က သူ့ ဘဲဆိုတာက..
မန်းဒလေးမှာ စံမြန်းနေတဲ့ စုံထောက်လန်ဘားများလား
ကိုရင်စည် ဂီဂီ မဟုတ်ဝူးနော်. ….
သူ့ ဘဲ က
မြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာ ရွှေစည်သာ တဲ့
လောလောဆယ် မြေလျှောက်ဖို့ ဖိနပ်ဖိုး ကို
သင်္ဘောလိုက်ရင်း ရှာနေတယ် ဆိုကလားဘဲ
အဲဒါ ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်ကနေ
သူ့ရင်ဘတ်မှာ ထိုးထားတဲ့သူ့ရည်းစား နမည်က ဘာလဲမသိဘူးနော်… Bane တဲ့…
Bunny Phyoe ရည်းစားလားမသိဘူးနော်…ဟိဟိ…. အဲ့ဒီလို ကောလဟာလလွင့် လိုက်ရင်…
အလကားနေ Bunny Phyoe နမည်ကြီးသွားတာပေါ့… မကောင်းဘူးလား……
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…ယောက်ျားလေးတွေလည်း သစ္စာရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားပေါ်မဖောက်ပြန်ပဲ ချစ်ကြပါ။ အဲ့လိုစိတ်အားငယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားကြပေါ့…ကိုယ်သစ္စာရှိရှိ
နဲ့မချစ်နိုင်ရင် အစကတည်းက မချစ်ကြနဲ့ပေါ့…ကိုယ်ကျင့်တရားလေးစောင့်ထိန်းကျပါ … ကိုကို ဦးဦး တို့… သူ့မှာလည်း ဒီကိစ္စအပြင်တခြားကိစ္စတွေလည်း ရှိမယ်ထင်တယ်…အားလုံးရောသွား
တော့ စိတ်ညစ်တာမခံနိုင်ဘဲ ငါသေသွားရင် ဒါတွေမခံစားရတော့ဘူးဆိုပြီး…ထွက်ပေါက်ရှာသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။
သတင်း အတွက် စိတ်မကောင်းပါ
လောကကြီးမှာ ဘာအကြောင်းပြ ချက်ကြောင့်မှ သတ်မသေသင့်ပါ ( မလုပ်ကောင်းသော်လည်း ရည်းစားအပေါ် မကျေနပ်ရင် လက်စားချေပေါ့)
အနားမှာ သူရဲ့ ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေတွေသာ ရှိရင် ဒီလို မဖြစ်နိုင်ပါ
စောစော ကတည်း တွေ့တယ် သတင်းကို လိုက်ကြည့်နေတာ ကောင်မလေးက ရုပ်ကလေး က သနားကမားနဲ့ ကောင်လေးက ဒီမှာ ကျန်ခဲ့ပုံရတယ်။
အဲ .. ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိ
ရူးပါ့ကွယ် အသုံးမကျလိုက်တာဆိုရင်လည်း ပြောတဲ့သူကလွန်နေဦးမယ်
ဟိုက သေတော့မှာမို့လို့အသက်စွန့်ပြီး ကယ်လိုက်တာဆိုရင်ဟုတ်သေးတယ်
အဲ.. မိုးဇိလေးလည်း ချစ်သူနဲ့ စကားများပီး
လမ်းခွဲရင်… အဲ့ဂလိုဒွေ လုပ်ရ၀ူး .. တိရား..
ဒီက ဇိလေးအတွက်ဆို ဒုတိယလူဖြစ်လည်း
ကျေနပ်ပါဒယ်… ;) ;)
စိုးတယ်… စိုးမိတယ်… စိုးရိမ်မိတယ်..
သည်ကိုရင်တော့ …မိုးဇိ တွေ့တာနဲ့ …အဟွင်းဟွင်းဟွင်င်င်း…..
ကိုရင်ကတော့မနိုင်ဘူး တဇိထဲဇိနေတော့တာဘဲ။ တစ်ချိန်လုံး ဇိဇိဇိ လို့ ရွတ်နေ လားမသိ။
ရုပ်ကလေးကလည်း ချော ၊ အရွယ်လေးကလည်းကောင်းတုန်းအချိန် … ။
ချစ်သူပစ်ထားခဲ့လို့ ကမ္ဘာပျက်မသွားပါဘူး …. ။ ကိုယ့်အပေါ် မတွယ်တာတဲ့လူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီလိုလုပ်သွားတာဆိုလျှင်တော့ … နှမျောစရာကောင်းလွန်းပါ … ။ကိုယ်တွေထင်တဲ့ အချစ်ကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်မှာ တခြားဘာပါဆယ်နယ်လ် ပြသနာတွေရှိလဲမှ မသိတာ … ။ သေသွားသူက သေသွားပြီပဲဆိုတော့လည်း .. အားမရတာတွေ ၊ ဝေဖန်တာတွေထက် … ကောင်းရာသုဂတိလားဖို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးမိပါတော့တယ် … ။
အခုတင် သူ့ပေ့ခ်ျကို ၀င်ကြည့်တော့ … တစ်ယောက်ကလာပြောထားတယ် … သူ့ဖုန်းကို ဘယ်သူသုံးနေသလဲတဲ့လေ … ဖုန်းကနေ ဖေ့စ်ဘွခ်လော့အင်လုပ်တာ တွေ့လိုက်ရပါသတဲ့တဲ့..
ဒါနဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ သူငယ်ချင်း အနည်းငယ်သာရှိတယ်ပြောတယ် …. ကော့မန့်တက်ရေးတဲ့လူတွေချည်းရေကြည့်လျှင်တောင် အတော်များနေပြီ …
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကောင်မလေးက အသက်ကလည်း
ငယ်ငယ် ရုပ်ကလေးလဲချောချော မိဘတွေ ဘယ်လောက်များ
ချစ်သူကြောင့်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီလောက်ထိ လုပ်ရသလား
ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးရတော့မှာပေါ့လေ ………
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်နဲ့ များ သတ်သေရတယ်လို့ ။ အနားမှာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေ မရှိလို့ ထင်ပါတယ်။ သေတဲ့သူကသေသွားပြီဆိုတော့ ကောင်ကင်ဘုံရောက်ပါစေလို့ ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အဲ့လိုဂျီး လုပ်ကောင်းဝူးရယ် ….
မြောက်များလှစွာသော စလုံးကျွန်းက ဂီဂီ့ အသိတွေထဲမှာ
သည်ကလေးမ မပါတာ သင်းကလေး ကံဆိုးဖို့ ဖစ်ခြေတော့သဂိုး….
အင်းလေ ဂီဂီ့ သာ သင်းကလေးသိရှာခဲ့မယ်ဆို
အဲ့ တက်တူးက ဂီဂီ့နာမည် ဖစ်နေရှာရော့မင့် ….
ဂလိုဂျီးလုပ်တာ စာမှာ ဖတ်ဖူးတာတော့ ဘာတဲ့
ဂျပန်ငါးရာ ငါးခါ ခံရတတ်တယ်တဲ့ …..
စိုးတယ် …စိုးမိတယ်… စိုးရိမ်မိပါတယ်…..
အော် ဒီကလေးမ ဂီဂီနဲ့ မတွေ့ရခင် တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချလိုက်မိတာ ကံကောင်းလေစွတကား …
ကျောက်ဆင်းတု ခေါင်းညှိတ်နဲ့သာ ဒီကလေးမ ကံဆိုးမိရင်တော့ လမ်းကြိတ်စက် တက်နင်းခံရတာမှ သက်သာပေးဦးမယ် …
မောဟ ဒေါသ တွေနဲ့ တေပြီး
တစ်ယောက်တော့ ဒယ်အိုးေ၇ာက်ပြီ
နောက်ကောင်မလေးတွေ ..အဲလိုနှမြော စရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြနဲ့နော်..
ရင်ငြိမ်းပွင့်ရယ် မင်းကသာအသက်ဆုံးရှူံးသွားတာမင်းချစ်သူက ဘယ်လောက်ထိဝမ်းနည်းနိုင်မှာမို့လည်း။
ရွာသူရွာသားတွေ နောက်ဘ၀ ရင်ညိမ်းပွင့်နဲ့ဆုံခဲ့ရင် သူသဘောပေါက်သွားအောင်၊
နောင် ဒါမျိုးမလုပ်ဖြစ်အောင် ၊သေချာဆုံးမလိုက်ကြဘာ……….
ချစ်တက်လိုက်ကြတာ …. ချစ်တက်လိုက်ကြတာ…. ခက်ပါ့…. ကောင်မလေးတွေ ငါ့တော့ အဲ့လိုမချစ်ကြနဲ့နော်…. XD
ဒီကောင်မလေး မန်လေးဂဇက်ကိုမလာမိလို့နေမယ် လာမိရင်ဒါမျိုးလုဎ်ဘို့စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူး(ဘဝကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်မဆိုင်ရဲဘူးဆိုရင်တော့ သူရဲဘောကြောင် လွဲမှားတဲ့လုဎ်ရပ်ပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားမိဘူးထင်ပါရဲ့)
မှန်လိုက်တာ ကောင်အို @ ကိုအောင် ရာ
လူပျိုကြီး မောင်မောင်ဇာ့ စာတွေဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်
လောကကြီးက ပျော်စရာကြီး ဆိုတာ သူလေး သိသွားမှာ အမှန်ပါပဲ
ဂီဂီက ရွာထဲက အပျိုဒွေရဲ့ အသက်ဆက်ဆေးလေး ဆိုဒါ ပြောပြလိုက်စမ်းဘာ…..
သည်ရက်ပိုင်းတော့ ဂီဂီ ကိုယ်တိုင်လည်း အမေးအမြန်း ထူတဲ့
ခမည်းခမက် မဟုတ်တဲ့ သဂျီး နဲ့(ကို)ဘလက်တို့ ကြောင့် ခုန်ချချင်နေကြောင်းပါ ….ခစ်ခစ်….
သင်္ချာဝင့်ကျော် စောင့်နေတဲ့ ရေကူးကန်ထဲကိုပြောပါတယ်…..
ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အချစ်က မီးတောက်နဲ့တူတယ်…
အချစ်ဆိုတာကြီးကို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလောက် ထင်နေတတ်တယ်…
ငယ်ရာက ကြီးလာသူတွေ သိနိုင်မှာပါ…
ဆရာပေါက်ရေ … ရွာပြင်မယ်တော်ကြီး ရွာထဲထိကြွလာပြီး ခင်ဗျားကို အကြွေးလိုက်တောင်းနေပြီ ..မရရင် သူကြီး နှလုံးပျူးနဲ့ တွေ့မယ်တဲ့ …
ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က စင်္ကာပူမှာဆုံးလို့ ရန်ကုန်ကို ပြန်ပို့လာတဲ့ တပည့်တစ်ယောက် အကြောင်းကြားခဲ့ရတယ်။
ဒလမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးနဲ့ ဇနီးမှာ သောကမီးတွေတောက်နေရတယ်။
ခေါင်းလျှော်ပြီး အဲယားကွန်းအခန်းမှာ အိပ်နေရင်း မနက်ကျတော့မှ ဆုံးနေတာသိရသတဲ့။
နောက်လကျရင် ခဏအလည်ပြန်လာမယ်လို့ မဆုံးခင်ညက ဖုန်းနဲ့ ပြောသေးသတဲ့။
သူ့အမျိုးသမီးကလည်း လင်ယောက်ျား အိမ်မှာမရှိပေမယ့် အိမ်ခြံမှာပန်းပင်လေးတွေနဲ့၊
မြက်တစ်ပင်မှတောင် မရှိအောင် ဂရုတစိုက် အိမ်ကို ထိန်းသိမ်းနေရှာတယ်။
မီးဖိုလေးကလည်း သပ်ရပ် တောက်ပြောင်နေတယ်။
တပည့်ကလည်း ကြိုးစားပြီး တက်တက်ကြွကြွ ပိုက်ဆံရှာဖွေတယ်။
လှပတဲ့ အနာဂတ်အတွက် မိသားစုတွေ ဝေးကွာနေရတာ။ သည်းခံမှ။ သည်းခံမှ ……တဲ့။
တလောကလုံး ဒင်း အကောင်ပဲ အချောင်းရှိတယ် မှတ်လား မသိ။
ကျနော်ဖတ်ဘူးတဲ့စာတစ်ခု ဘယ်သူရေးတာလဲတော့ မသိဘူး။
ကိုပေါက်ပြောတဲ့သဘောက …..ရှင်ခြင်းမှာ လူဟာ တစ်ခါသာသေရပေမယ့်…… ရှင်ခြင်းမှာ လူဟာ အခါခါသေရသည်တဲ့…ထီးဆိုင်ပြောတာနော……ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ထိတော့ မမိုက်မဲသင့်ဘူး ကလေးမရယ်..။ ကိုယ့် အလိုပြောရရင် ဒီလူ့ကိုသတ်ပြီးမှ သေတာ တန်တယ်ပြောရမယ်။ လောကကြီးကို ချစ်ခြင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားပေမယ့် မတရားရင်တော့ ……။
မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့……………………….
မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့………………………
ဒါ့ကြောင့်ပြောတာ……အချစ်ဆိုတာ ကဗျာတွေ၊ စာတွေရေးဖို့ ကုန်ကြမ်း ပါလို့။ ….ဟိုးတစ်ခါပို့စ်တုန်းက ရေးဘူးတယ်။
ကျမ မန်ဂေဇက် Home Page ပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးတွေ အရင်ဖတ်ပြီး
တခြား New Window တွေဖွင့်ပါတယ်။ Home Page ပေါ်က
(စင်ကာပူနိုင်ငံနေ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး တိုက်ပေါ်မှခုန်ချသတ်သေ
– ပေါက်ဖော် |122- Hits|) ဆိုတာကို လှမ်းဖတ်ရင်း တခြား ဟာတွေဖွင့်ရင်း
နှုတ်ကကို တစ်ယောက်တည်း ” ရင်ငြိမ်းပွင့်များလား” လို့ရေရွတ်နေမိသေးတာ။
သူတော်တော်ကြာပြီ.Facebook မှာ “မောင် ကျမကို ထားခဲ့သလား၊ မချစ်တော့ဘူးလား”
စသဖြင့်….ကြေကွဲ နေတာကြာပြီ။ သူ့ရည်းစားကို ဆွဲသွားသူတွေကိုလည်း ပေါက်ကွဲ
ဆဲဆိုနေတာ။ ကျမ စိတ်ထဲ ဒီကလေးမ အတော်ခံစားနေရသလားပေါ့။
အခုဒီသတင်းဖတ်လိုက်ရတော့ အတော်စိတ်ထိခိုက်မိတယ်။ သူ့မိဘတွေ ပိုရင်ကျိုးရှာမှာပဲ။
အရမ်းစာနာမိပါတယ်။ ကျမ သူ့ Message Box ထဲမှာ (သူမဖတ်နှိုင်တော့မှန်းသိပေမဲ့)
တီချယ်ကြီးရေ … သူမဖတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အတပ်မပြောနိုင်ပါဘူး ။
အစိမ်းသေကလည်းဖြစ် တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်တတ်တဲ့ သူ့အကျင့်ရှိတဲ့လူ… အွန်လိုင်းကို ပြန်လာကြည့်လျှင်ကြည့်မှာပေါ့ … ။ ကျွန်မသူ့ ဟုမ်းပေ့ခ်ျမှာဝင်ကြည့်တော့ …သူ့ဖုန်းကနေ လော့အင်လုပ်ထားတာ တွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ် … ။ ဖတ်ရင်းကြက်သီးထတယ်
အော် – ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး Rebecca ပြီးတော့ ….(မနေ့ နဲ့ တနေ့ ကတင် Dr Phil ရဲ့ဆန်းစစ်ချက်အရ သေကြောင်းကြံခြင်းဆိုတာကို ခိုင်မာတဲ့သက်သူထူဘို့ အချိန်အတိုင်းအတာတခုပေးရဘို့လိုကြောင်း မှတ်ချက်တွေ TV မှာကြည့်လိုက်ရတယ်။ တယောက်ယောက်ကလုပ်ကြံတာဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကလဲအတော်လွှမ်းမိုးလာပါတယ်။)
ရပ်ခြားမြေရောက် မြန်မာလူငယ်လေးတွေ အချိန်မရောက်ခင်မှာ မတော်တရော် သေကြရတာ..စိတ်ထိခိုက်စရာ…သမျှောစရာပါ။
ဘာသာရေးရှုဒေါင့်ကကြည့်ရင် လဲ သေကြောင်းကြံခြင်းဟာ သိပါအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ ထဲမှာ ဒိလိုကိစ္စမျိုးတွေ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ အသိပညာပေးရေး လုပ်ကြဘို့အချိန်တန်ပြီထင်တယ်….
ဘာမဟုတ်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကြီးကို စတေးပစ်လိုက်တာ နှမြောစရာကြီးပါ
ဘာအကြောင်းနဲ့မ လောကကြီးကို ဒီလိုမျိုး အရှုံးမပေးသင့်ဘူး
ဒီလိုမျိုးဆို ပိုဆိုးပါ့ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ အတွက်သေရတာမ နည်းနည်းတော်သေး ကိုယ့်မချစ်လို့သစ္စာမဲ့တဲ့သူ အတွက်များ သေရတယ်လို့ မတန်လိုက်တာ
ကိုရင်စည်သူပြောသလို လောကကြီးက နေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာပါဗျာ
လိုတာမရ ရတာမလို ဂဂျီ၈ဂကြာင်ကျနေရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်ရတာပေါ့
နှမြောစရာဗျာ သူ့ အရည်အချင်းတွေ
စိတ်မကောင်းဖြစ်၇ုံ ပဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး.. ဘာသားရေးအဆုံးအမ အားနည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်…ဝဋ္ဋ်ကြွေးရှိရင်းလည်း ဒါမျိုးတွေက ခံ၇တယ်လေ… အင်း အင်ဇာဂီ ပြောသလို ဂျပန်ငါးရာ ငါးခါ ဆိုတာကို သိခဲ့ရင့်တော့…….. :D
တစ်ချို့က သူတို့ကို သူများသနားစရာလို့မြင်ရင်ပိုဆိုးတတ်တာတွေရှိတတ်တယ်၊
ဒါမျိုးအတွက်တော့၊ သူနဲ့အတူတစ်သားထဲခံစားပြပြီး၊မှန်ကန်တဲ့သတ္တိ နဲ့ထွက်ပေါက်ရောက်အောင်
ကွန်ပျူတာ နဲ့ပဲ အချိန်ပြည့်အဖေါ်လုပ်သူဆိုတော့၊
ကဲ ကဲ ရွာထဲက ကွန်ပြူတာမမတွေ ရေ သတိထား—သတိထား။
သူ့ကိုအားကျလို့ ကညာစင်ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ယောက် အိပ်ဆေးသောက်ပြီး သေပြန်ပြီတဲ့။ မိဘတွေကိုသနားတယ်။
အခု နင်နဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ သူဟာ ငါ့ဘ၀မှာ အချစ်ရဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…ငါဒီလိုပြောလို့ သ၀န်တိုတယ်လို့ ထင်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်…ဒါပေမဲ့ နင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ချစ် နေရင် ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲ…နင်နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…ရိုင်းသလိုဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနာကျင်လွန်းလို့ပါ…ငါသူ့ကို စွန့်လွှတ်ရတော့မယ်…သူ့ကို မချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး…နင့်ကို ယုံကြည်နေတဲ့သူ့ကို ငါ ပျော်စေချင်တယ်…သူကပြောတယ်…နင့်ကို အသည်းနစ်အောင် ချစ်တယ်တဲ့… မိန်းကလေးရေ…ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ…သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှာစရာ လေးတွေ ရှိတယ်… မှတ်ထားစေချင်တယ်…
* သူကြိုက်တဲ့ အရောင်က အနက်ရောင်လေ…သူနဲ့အပြင်ထွက်တိုင်း မင်းကို အနက်ရောင် ၀တ်စေချင်တယ်…
* သူက စတော်ဘယ်ရီသိပ်ကြိုက်တယ်… သူသွားစားလေ့ရှိတဲ့နေရာကသိပ်တော့ အများကြီးမရှိဘူး… သူနဲ့ လိုက်သွားပေါ့…
* သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ အားလုံးကို ကြိုးစားပြီး နားထောင်ပေးပါကွာ… ဒီသီချင်းတွေ နင်လဲ ကြိုက်လာမှာပါ…
* သူ ဂိမ်းဆော့တိုင်း နှောင့်မယှက်မိစေနဲ့…ဒါပေမဲ့အမြဲ သူ့ဘေးမှာနေပေးနော်…ဂိမ်းက သူ့ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့ အရာမို့လို့ပါ…
* သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူ အသောက်အစားလုပ်ရင် သွားခွင့်ပေးလိုက်ပါ…သူနဲ့ ရန်မဖြစ်ပါနဲ့…သူငယ်ချင်းတွေဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ… ဘီယာမရှိရင် သူ့နေ့တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး….
* သူဖုန်းဆက်ရင်… နင် ဘယ်လောက် အလုပ်များများ ဆက်ဆက်ကိုင်ပါ…ဖုန်းသံကို silent မလုပ်ထားနဲ့နော်…
* သူ့အိမ်ဖုန်းကို မဆက်ပါနဲ့…သူ့အမေ သူ့အတွက်စိတ်ပူမှာ သူမလိုလားဘူးလေ….သူက သူ့အမေကို အရမ်းချစ်တာ…
* တခြားကောင်လေးတွေနဲ့ မင်း သူငယ်ချင်းမဖြစ်စေနဲ့နော်… သူမနာလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လေ…
* ညတိုင်း သူမအိပ်ခင် … သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့ မမေ့နဲ့နော်…သူက သိပ်ကြားချင်တာလေ….
* အရေးကြီးဆုံးက နင် ဘယ်ရောက်နေနေ…စက်တင်ဘာလရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ်ဆိုရင် သူနဲ့အတူတူရှိနေပေးပါ…သူ့မွေးနေ့က စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့လေ…သူ့မွေးနေ့မှာ သူနဲ့အတူတူ ချစ်ဂန္တ၀င်ဆန်ဆန် ပါတီပွဲ ကျင်းပဖို့ မမေ့နဲ့နော်…
* ငါ့ကိုယ်စားအဲဒါ တွေကို လုပ်ပေးပါ…မိန်းကလေးရယ်… ငါမင်းဆီက လိုချင်တာ အဲဒါပါပဲ…
* ငါတို့ ၂ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မနှစ်သက်ကြဘူးလေ… သူ့ကို ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့…စိတ်ချမယ်နော်…
* ငါနင့်ကို သူနဲ့အတူတူတွေ့ရင် မနာလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်….ဒါပေမဲ့ သူချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူမြင်နေရရင် ငါဝမ်းသာပါတယ်…
ဒီလောက်ပါပဲ မိန်းကလေးရယ်…သူ့ကို စောင့်ရှောက်ပါ… ၂ယောက်လုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေနော်…
(ဇေယျာ) 17/Nov/2011, Thursday, 5:45 pm
ငိုချင်သလိုလို……စိတ်ညစ်သလိုလို……..ကိုယ်နဲ့လည်း ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲ။
ဒီသတင်းက မနေ့ကညကတည်းက ရှိနေတာပါ။ ကွန်းမန့်တွေအများကြီးတက်နေပေမယ့်
စိတ်မ၀င်စားမိခဲ့ဘူး။ အခု ကောင်မလေး နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့စာလေးကိုဖတ်လိုက်ရတော့
ရိုမီယိုနဲ့ ဂျူးလိယက် ရုပ်ရှင်ကြည့်တုန်းက ခံစားချက်မျိုးလေး ပြန်ရမိတယ်။
ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့သေခြင်းကို အနုပညာဆန်ဆန် ဖန်တီးသွားခဲ့တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဒီစာလေးကိုသူမရေးခဲ့တယ်ဆိုရင် ရေးနေတဲ့ အချိ်န်မှာ သူမဟာ ဘယ်လောက်ကြေကွဲနေလိုက်မလဲ။
ခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ..တွေ့ တာ..သူ့ အကိုတင်ထားတာလို့ ပြောတယ်.
အနက်ရောင် ဒေါက်ဖိနပ်ပါ ၀တ်ထားတယ်
ပေါင်နှစ်ချောင်းကတော့ ဆန့် ကျင်ဘက်ပြဲထွက်
အပေါ်ပိုင်းရုပ် သိပ်မပျက်ဘူး..အောက်ပိုင်းတော့ ရစရာမရှိဘူး….ရက်စက်တယ်..ဗျာ.
သတင်းကြားကြားချင်းနောက်နေတာလို့ပဲ ထင်ခဲ့မိပါတယ် …တစ်ခါမှ မသိကျွမ်း မမြင်ဖူးပေမယ့် တကယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲခံစားခဲ့ရပါတယ် …ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ …
မရင်ငြိမ်းပွင့်အတွက် ပြုခဲ့သမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက် ဒီနေရာကနေပဲ အမျှအတန်း ပေးဝေလိုက်ပါတယ် ရောက်ရာဘုံဘ၀ကနေ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ
အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော့ သာဓု သာဓု သာဓု
တမင်ကြံစည်တာမဟုတ်ပဲ မတော်တဆ ဖြစ်တာလို့ သိရပါတယ်
အလုပ်သွားဖို့ ..လှေခါးအဆင်းမှာ..ချော်ကြရာက ဆုံးသွားတာလို့ သိရပါတယ်
မယဉ်ငြိမ်းပွင့်ဟာ မိသားစုကို လစဉ်ထောက်ပံ့နေသူဟုလဲသိရပါတယ်
ရေဝေးသုဿန်မှာ သဂြိုလ် ပြီးပြီဖြစ်ပါကြောင်း………………………………….။